Ụgbọ elu Belize si Seattle na Los Angeles na ụgbọ elu Alaska ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Belize si Seattle na Los Angeles na ụgbọ elu Alaska ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belize • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • News • ndị mmadụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu Belize si Seattle na Los Angeles na ụgbọ elu Alaska ugbu a.
Belize na-enye ọmarịcha ezinaụlọ ga-enwe mmasị na gburugburu ebe obibi - site na àgwàetiti ndị mara mma ruo oke ọhịa na saịtị ochie. Ma ọ dị nso karịa ka ị nwere ike iche: Site na LA, ọ bụ naanị ụgbọ elu awa ise, na site na Seattle ọ bụ awa isii.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe mba ụwa ọhụrụ ị ga-agbanarị - yana ngwakọta osimiri, ihe omume na ihe nketa na-adịghị anya na West Coast - oge eruola ịtụle Belize nke anwụ gbasasịrị. Iji mee ka atụmatụ njem ahụ dị mfe, Alaska Airlines malitere ọrụ anaghị akwụsị taa na Belize City site na Seattle (SEA) na Los Angeles (LAX).
Site na isi obodo Belize, mbara igwe bụ oke maka nyocha na ihe ọchị. N'iburu n'ọchịchọ siri ike maka ụgbọ elu na Belize ma na-ewulite ọkwa mbụ anyị maka ọrụ oge n'oge oyi, Alaska ụgbọ elu ugbu a na-ezube ịfe ụzọ Los Angeles-Blize City kwa afọ.
“Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ, ahịa Belize nọ na radar anyị. Obi dị anyị ụtọ ugbu a ịmalite ọrụ site na Seattle na Los Angeles, "Brett Catlin, osote onye isi oche nke netwọkụ na njikọ aka kwuru. Alaska Airlines. "Belize na-enye ohere dị egwu nke ezinaụlọ na-eche echiche - site na àgwàetiti ndị mara mma ruo n'oké ọhịa na saịtị ochie. Ọ dịkwa nso karịa ka ị nwere ike iche: Site na LA, ọ bụ naanị ụgbọ elu ga-ewe awa ise, yana site na Seattle ọ bụ awa isii. "
"Na mgbakwunye na ịdọta nnukwu ego azụmaahịa na ego mmadụ, ụgbọ elu ọhụrụ a ga-akpalikwa njem nlegharị anya nke dị mkpa maka ya Belize' ọganihu. Ọ na-abịa n'oge kwesịrị ekwesị ka ọ na-akwalite mbọ mgbake ụlọ ọrụ ahụ," Hon. Anthony Mahler, Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya na mmekọrịta mba ọzọ. "Ya mere, anyị ji mmekọrịta anyị na ụgbọ elu Alaska kpọrọ ihe n'inye ndị njem si West Coast nwee mmasị na-agbake onwe ha ume na izu ike na ọla okpomọkụ anyị ka anyị na-emikpu na ahụmịhe omenala pụrụ iche."
Ọrụ Alaska ka Belize na-arụ ọrụ ugboro anọ n'izu n'etiti Los Angeles na Belize City (BZE) na ugboro abụọ kwa izu n'etiti Seattle na Belize City - naanị n'oge ezumike.
Na-amalite nsọtụ Obodo Mmakọ Hapụ Abịa Frequency Aircraft
Onwa. 19 Afọ zuru ezu LAX - BZE 11: 00 am 5: 30 pm M, W, F, Sa 737-800
Onwa. 20 Afọ zuru ezu BZE - LAX 10: 00 am 1: 30 pm T, T, Sa, Su 737-800
Onwa. 19 Ka 21 Oké osimiri - BZE 8: 30 am 4: 35 pm F, Sa 737-800
Onwa. 20 Ka 22 BZE - oke osimiri 11: 00 am 3: 55 pm Sa, Su 737-800